Iikhathuni ezili-9 zakudala zeMortadelo kunye neFayilemon | Uncwadi lwangoku
Ukusuka kwiMortadelo kunye neFayilemon comics.
Kutshanje bendibhala inqaku malunga ne ababhali abakhulu abahlekisayo IsiSpanish kwaye, ewe, ibandakanya utitshala omkhulu UFrancisco Ibáñez. Namhlanje ndizisa izidalwa zakho ezidumileyo, IMortadelo kunye neFayilemon, kuba nanini na xa ndichitha iintsuku ezimbalwa ekhaya kuya kufuneka ndiphinde ndifunde ezinye zezakhe iiphoto. Kwimveliso enkulu ekhoyo Ndenze olu khetho lwe 9 endikubalaselisa ngolandelelwano lwamaxesha. Zeziphi ezakho?
1 Oobhontsi ababini up «esmirriau»
2 Umlingo umlingo
5 I-cocoa yendawo
6 Enjani yona inkqubela eyenzeka kwinkulungwane yama-XNUMX!
8 Mermaid encinci
9 Uxhwilo olukhulu
Oobhontsi ababini up «esmirriau»
I-Super ibuza uMortadelo kunye neFayilemón ukuba bagcine ingqekembe yamandulo nexabiseke kakhulu. Kodwa yibeke kwindawo ekhuselekileyo, IChapeau el esmirriau iyayiba. IChapeau lutshaba oluncinci, kodwa nge umnqwazi apho nantoni na inokuphuma kwaye igcwele amaqhinga.
UMagín umenzi wobugqi sisaphuli-mthetho esibi esinakho ukwenza njalo hlela nabani na ojonga emehlweni akho wenza ntoni yamkele ubuntu nawuphina umntu, into okanye isilwanyana. Oku usebenzisa ukuphanga kuso sonke isixeko. I-Super iyalela uMortadelo kunye noFammon ukuba bambambe.
UBruno Megawatt Ungumntu odlulileyo ofuna ukuziphindezela kwiSuper ngokumvalela. Wayefudula eyingcali kanomathotholo kwaye uya kusebenzisa into yakhe: i Umbulali okhupha i-kHz, amaza abhangisa intando yabantu. Yile ndlela aya kuyithumela ngayo kubo bonke abo basebenza ne-Super ngohlobo lwezinto ezinjengepeni, ingqekembe, njl. Zonke ziwela phantsi kwempembelelo yazo.
Iqela eliyingozi labaqweqwedisi lifuna thimba u-Alfonsito Dividend, nyana womphathi webhanki, ukuba ucele intlawulelo. IMortadelo kunye neFayilemón kuya kufuneka ziye kwifayile ye- si kolweni ka-Alfonsito ukunqanda ukubanjwa kwakhe kwaye khusela abantwana.
Ine a Isiqalo esihle kwikomkhulu leZizwe eziManyeneyo. Apho amagunya amakhulu adibana ukunqanda imfazwe kunye nokujongana phakathi kukaRonald Reagan kunye noKonstantin IChernenko yinto yabantu. Ewe, iinkokheli zehlabathi azivumelani kwaye zonke zilungiselela imfazwe ngokusungula izikhululo ze-orbital. ISpain ayiyi kusala ngasemva kwaye iya kuqhuba Iprojekthi yokuthumela isiseko sithuba emajukujukwini. IMortadelo kunye neFayilemon iya kuba yile oosomajukujuku bexesha elizayo Bayeke bahambe.
Enjani yona inkqubela eyenzeka kwinkulungwane yama-XNUMX!
Utitshala Intsholongwane Uyile i Isixhobo esikwazi ukuthumela abantu kwinkulungwane yama-XNUMX ndibabuyise. Ke banako thintela ulwaphulo-mthetho oluzayo kwaye iSuper ithathe isigqibo sokuba iMortadelo kunye neFayilemon banoxanduva lokuvavanya ukuveliswa kwayo. Ngenxa yempazamo, uNjingalwazi Bacterio kunye nonobhala u-Ofelia ngengozi bayahamba nabo. Kodwa kukho into engahambanga kakuhle kwaye endaweni yokuya kwinkulungwane yama-XNUMX bavela ekuqaleni kweyama-XNUMX. Ke, baya kudlula kwezona ziqendu zigqithileyo zenkulungwane njengokuwa kwe Titanic, Las iimfazwe zehlabathi okanye Imfazwe yamakhaya yaseSpain.
Ngengozi USuper utyholwa ngokuluma iimpundu zika-Ofelia. Umtshutshisi ICarcamal Scurvy ifuna ukuyifaka kwinkqubo ye ukuphambuka ukumenza agxothwe. Ngenxa yoku akathandabuzi ukusebenzisa amangqina obuxoki. UMortadelo kunye neFayilemon kufuneka bafumane u-Ofelia ukuba asirhoxise isikhalazo uvakalise la mangqina.
Utitshala Intsholongwane, Kwakhona, uyile i- vivimetalillus, umpu we-ray owenza nayiphi na isinyithi iphila. ISpeyin iya kubonisa ukuveliswa kwayo Copenhague kwaye iMortadelo kunye neFayilemón ziya kujongana nokhuselo lwayo. Kodwa ekufikeni eCopenhagen, umbane ugxothwe ngengozi kumfanekiso owaziwayo we- i-siren, nto leyo eya kumbangela ukuba abaleke esixekweni. UMortadelo kunye neFayilemon kufuneka bambambe ukuze bambuyisele endaweni yakhe. Kodwa UMortadelo uya kuthandana naye.
Babambe uFrancisco Ibáñez ngokwakhe kunye nemiyalelo ye-TIA yokuphanda iiarhente zayo, kweli bali, eziya kuthi Intsebenziswano eRompetechos, ekuphela kwengqina lokunyamalala kweIbáñez.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » IiComics » Ezona 9 zihlekisayo zakudala zeMortadelo kunye neFayilemon
Udliwanondlebe olukhethekileyo noJael Lopumo: "Ndonwabile ngokupapashwa kweLito en Marte kunye noKaizen Editores"